Kolone Daraartu Tullu/ Kutaa tokkoffaa – siifsiin
Seenaa Kolonel Daraartu Tullu gabaabumatti ibsuun baay’e rakkisaa waan ta’eef, hanga danda’amaneti xiqqesinee isiif dhiyeesuuf yaalla. Sababiin isaa jabaa ofii abbadhumatuu faarfata waan ta’eef. Daraartu kan dhalatte ganda baadiyaa Oromiyaa keessatti, nannawaa Boqojiitti. Nannawwan sun immoo akkuma beektan burqaa atileetota keenyatti.
Waantonni Daraartu adda taasisan waantota heddutu jiru, fakkenyaf ishee, Akka Afrikaatti dubartii jalqaba olompikii irratti hirmaachuun warqee argamsiisuu dandeessedha. Yeroo sanatti meetira 10,000 fiiguun bara 1992 magalaa Barseloonatti addunyaa afaan qabachiifte.
Yeroo muraasaf miidhama ishee mudateen figichaa dhiifte, bara 1995 AAF addunya shampiyooni qaxaamura biyyaa jedhamu irratti hirmaachuun warqee qrgachuu dandeserti. Morkii kana adda kan godhuu immoo isheen xayaara irraa buute, yeroo bakka dorgomichaa gessuu sa’atii tokko qofatu hafa ture. Isheenis kallattin gara dorgomichaa seente.
Bara 1997 ammas irra deebin fiigicha qaxaamuraa mo’atte. Bara 2000 tti olompikii addunyatti yeroo lammaffaa fageenya meetora 10,000 fiigidhaan mo’achuu dandeserti.
Walii galatti akka oddeefannoo kiyyatti medalaiyaa olompikii fi addunyaawwa jaq’a argachuu dandeesretti. Itti fufa….
Previous Previous post: Duudhaa Hawaasaa
Next Next post: Waantota dinqisisoo